Iimpazamo kwiNtengiso yezeNtlalontle ekufanele ukuba uyiphephe Martech Zone
Iimpazamo zeNtengiso yezeNtlalontle kufuneka uziphephe
NgeCawa, ngoJulayi 5, 2015 NgeCawa, ngoJulayi 5, 2015 Douglas Karr
Rhoqo kunoko, ndiva ngakumbi nangakumbi iinkampani zithetha ngemidiya yoluntu ngokungathi yenye nje into yosasazo. Imidiya yokuncokola ingaphezulu kakhulu koko. Imithombo yeendaba kwezentlalo ingahlalutywa ngobukrelekrele, ijongiswe ngengxelo kunye namathuba, isetyenziselwa ukunxibelelana namathemba kunye nabathengi, isetyenziselwa ukujolisa kunye nokwazisa uphawu lwakho kubaphulaphuli abafanelekileyo, kwaye kuxhamliweyo ukwandisa igunya labasebenzi bakho kunye nodumo.
Nasiphi na isicwangciso esiliqili sentengiso yedijithali sibandakanya icandelo elidibeneyo elinamajelo asekuhlaleni. Ukuqala okanye akunjalo, lelinye lawona maqonga edijithali amahle kakhulu okuqhubela phambili amashishini phambili ngokukhawuleza, ngaphandle kokuba intengiso yemidiya yoluntu yenziwe ngokufanelekileyo. Kwabatsha kumzi mveliso wentengiso yedijithali, ukwenza umbono wokuqala olungileyo kwimidiya yoluntu kubaluleke ngakumbi njengoko befumana ithuba elinye lokulungisa. Ukuphulukana nelo thuba kuthetha ukuba semva ngasemva kwabakhuphisana nabo kunye nokulungisa igama ngokwalo okungekho lula kangako. UJomer Gregorio, ukuThengiswa kweDijithali kwiiPhilippines
Nazi iimpazamo ezi-8 zeNtengiso yezeNtlalontle ekufuneka uziphephe
Ukungabinayo isicwangciso seendaba zoluntu nokuba yintoni.
Ukwenza iiakhawunti kwi maninzi kakhulu amaqonga kungekudala.
Ukuhlawulela abalandeli bobuxoki.
Ukuthetha kakhulu malunga negama kunye nophawu lodwa.
Sebenzisa okungabalulekanga kunye ii-hashtag ezigqithisileyo.
Ukwabelana kakhulu uhlaziyo kwixesha elifutshane. (Kodwa usenokungabi njalo ukwabelana rhoqo kangangoko)
Ukulibala uku ukuphonononga.
Ukuyityeshela zentlalo inkalo yemidiya yoluntu.
Uninzi lwezi mpazamo ziyafana ne-infographic yangaphambili esabelana ngayo iimpazamo kushishino kwimidiya. Inye into ephambili endinokuyongeza kule nto kukuba uhlala uhlala uzama ukwakha ixabiso kunye nokukhokelela abalandeli bakho kwifowuni yesenzo. Anditsho ukuba ndibeke lonke uhlaziyo, ndigcine engqondweni ukuba isicwangciso-qhinga sakho kufuneka sibandakanye amalungu amatsha abaphulaphuli abuyele kuhlobo lwakho ukuba balandele, fan, idemo, ukhuphelo, ubhalise okanye uguqule.
tags: intengiso yedijithali Philippineskwimidiya yoluntuSocial Media Marketingiimpazamo zentengiso yemidiya yoluntuiimpazamo kwimidiya yoluntu
Indlela iBrand yakho enokuPhumelela ngayo ngeNtengiso yeVine
Isikhokelo sokuThengisa iB2B esipheleleyo kwiSlideshare
Mar 12, 2016 ngo-11: 11 AM
Vumelana ngokupheleleyo neempazamo ozikhankanyileyo ngasentla.
Ezi zezona mpazamo zixhaphakileyo kwimidiya yoluntu ezenziwa ngabantu. Imithombo yeendaba zoluntu zezona ndawo zibalaseleyo ze2 kwindawo yokuqhuba yabathengi kunye nabafundi emva kweinjini yokukhangela.
Kunye nezi mpazamo, ukungaboneleli ngohlaziyo oluqhelekileyo ikwayimpazamo eqhelekileyo njengoko ndicinga. Ndibonile iimveliso ezininzi kangaka kuFacebook ezingaze zibakhathalele abaphulaphuli kwaye yiyo loo nto bengazibandakanyi.
Abantu bahlala befuna ukonwatyiswa okanye into enokugcina imixholo ixakekile kwaye ukuba naluphi na uphawu aluboneleli ngolu hlobo lomxholo kunokuba kukho amathuba aphezulu okuba abaphulaphuli balibale igama lophawu lwabo.
Ke ukugcina igama labo engqondweni yabo, kufuneka babonelele ngomxholo onokuthi uncede, wonwabe kwaye ugcine abaphulaphuli babo bexakekile.
Ndonwabile ukuba uzikhankanyile ezi mpazamo zinkulu kwimithombo yeendaba. Ke enkosi ngokwabelana nathi. 😀
Mar 13, 2016 ngo 3:43 PM
Enkosi ngezongezo zakho-ndiyavuma ngokupheleleyo David!
Jul 11, 2016 ngo-11: 22 PM
Enkosi ngokuqonda okuhle kunye nezikhumbuzo! Zonke ezi ziyinyani. Ndiyavuma! Ukuthumela izithuba ezininzi kakhulu ngexeshana elifutshane kuyimpazamo kwaye ndihlala ndihlangabezana nale ngxaki. Ndisakhumbula xa ndandisengumqali, ndathumela umxholo kathathu ngemini kwaye abantu bawuhoya ngokukodwa xa isihloko singenamdla kwaye abafundi bengenako ukunxibelelana. Ukufundwa kwakhona kubalulekile ukwakha ukuthembana kunye nokuthembeka kuhlobo lwakho, upelo kufuneka ihlale ihlolwe. Iposti enkulu!